အဘယ်သို့ငါအခမဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအကူအညီနဲ့ရနိုင်? | ဥပဒေရေးရာ infromation နှင့်အရင်းအမြစ်များ | USAHello
သင်တစ်ဦးရှေ့နေလိုအပ်ပါသလား? သငျသညျလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးသို့မဟုတ်နိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့်နှင့်အတူကူညီလိုအပ်ပါသလား? ဒုက္ခသည်များနှင့်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူများအတွက်အခမဲ့သို့မဟုတ်တန်ဖိုးနည်းဥပဒေရေးရာအရင်းအမြစ်များကိုရှာပါ. လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးလိမ်လည်မှုကနေကိုယ့်ကိုယ်ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူ.
အဘယ်အရာကိုမ လိုလားတဲ့ Bono ဆိုလို?
တစ်ဦးက လိုလားတဲ့ Bono ရှေ့နေအခမဲ့ဝန်ဆောင်မှုများကိုပေးသည်သူတစ်ဦးရှေ့နေဖြစ်ပါသည်. အတော်များများကရှေ့နေများကရှေ့နေသို့မဟုတ်တရားဝင်အရင်းအမြစ်များကိုများအတွက်ပေးဆောင်ဖို့ငွေအလုံအလောက်မရှိကြပါဘူးသောသူဒုက္ခသည်များသို့မဟုတ်လူတွေကိုကူညီပေးဖို့ဟာသူတို့ရဲ့အချိန်လှူဒါန်းပါလိမ့်မယ်. ဤရွေ့ကားအခမဲ့ဥပဒေရေးရာန်ဆောင်မှုများဟုခေါ်ကြသည် လိုလားတဲ့ Bono န်ဆောင်မှုများ.
ဘယ်မှာငါလိုလားတဲ့ Bono ဥပဒေရေးရာန်ဆောင်မှုကိုရှာတွေ့နိုင်ပါသည်?
Lawhelp.org ဥပဒေရေးရာအကူအညီနှင့်သတင်းအချက်အလက်လွတ်မြောက်ရန်သင့်အားဆက်သွယ်. ဒါဟာသင်လိုလားတဲ့ Bono ကိုကူညီရှာဖွေခြင်းနှင့်တန်ဖိုးနည်းဥပဒေရေးရာအကူအညီလိမ့်မယ်.
ဘယ်မှာငါလိုလားတဲ့ Bono လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများကရှာတှေ့နိုငျ?
သငျသညျလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး-related ကိစ္စရပ်များနှင့်အတူအကူအညီလိုပါလျှင်, ဒါကြောင့်သင်သာတစ်ဦးထံမှအကူအညီရသင့်ကြောင်းသွင်းကုန်ဖြစ်ပါသည် လိုင်စင်ရရှေ့နေသို့မဟုတ်အသိအမှတ်ပြုကိုယ်စားလှယ်. သငျသညျအကူအညီတောင်းသင်၏မိတ်ဆွေများသို့မဟုတ်မိသားစုကိုမေးခဲ့လျှင်, သူတို့မတော်တဆသင်သည်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးန်ဆောင်မှုများနှင့်အတူဒုက္ခ၌သငျရနိုငျသောမမှန်ကန်သောအချက်အလက်ပြောပြပါလိမ့်မယ်.
ImmigrationLawHelp.org LawHelp.org ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာအနိမ့်ဝင်ငွေရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူဥပဒေရေးရာအကူအညီကိုရှာဖွေကူညီပေးသည်.
သင့်ရဲ့ပြည်နယ်ကိုရှေးခယျြနှင့်သင့်ပြည်နယ်အတွက်လိုလားသူ Bono ရှေ့နေများများစာရင်းကိုရှာဖွေရန်အတွက်မြေပုံသုံးပါ.
အမျိုးသားလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေန်ဆောင်မှုများ Directory ကို
နိုင်ငံတော်ကလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေဆိုင်ရာန်ဆောင်မှုပေးသူကိုရှာဖွေဖို့မြေပုံသို့မဟုတ်ပုံစံကိုသုံးပါ, ခရိုင်, သို့မဟုတ်ထိန်းသိမ်းရေးစက်ရုံ. အခမဲ့သို့မဟုတ်တန်ဖိုးနည်းလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေဆိုင်ရာန်ဆောင်မှုကဒီ directory ထဲတွင်ထည့်သွင်းထားပါသည်များကိုသာအကျိုးအမြတ်အတွက်မဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်းများ.
အဆိုပါ website တွင်တိုက်ရိုက်ချက်တင်
BeFree မှစာသားကို "အကူအညီ" သို့မဟုတ် "INFO" (233733)
ဆေးခန်းရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူမှဥပဒေရေးရာနှင့်အခြားဝန်ဆောင်မှုကိုဆက်ကပ်ကြောင်းအဖွဲ့အစည်းများကွန်ယက်တစ်ခုဖြစ်သည်. သငျသညျအနီးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကိုရှာဖွေသူတို့၏ directory ကိုသုံးပါ.
သငျသညျ FindHello အားဖြင့်သင်တို့ကိုအနီးအကူအညီတောင်းကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်, USA တွင်ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်အရင်းအမြစ်များကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့စာရင်း. သင်၏ဘာသာစကားကိုရွေးချယ်ပါ. သင့်ရဲ့မြို့၏အမည်ကိုရိုက်ထည့်ပါ. ထိုအခါရှေးခယျြ “နိုင်ငံသားဖြစ်မှုနှင့်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး။”
Exile အစီအစဉ်အတွက်ငြ့်အရေးဆိုင်ရာလောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်နိုင်ငံများတွင်အခမဲ့နှင့်တန်ဖိုးနည်းဥပဒေရေးရာန်ဆောင်မှုများကို List. သင့်ရဲ့တိုင်းပြည်အတွက်အခမဲ့ဥပဒေရေးရာန်ဆောင်မှုများအတွက်စာရင်းစစ်ဆေး.
ဒုက္ခသည်ခရီးသွားစာရွက်စာတမ်း & အခွင့်အရေး
The information on this page comes from the many trusted sources listed here. ဒါဟာလမ်းညွှန်မှုများအတွက်ရည်ရွယ်သည်နှင့်အမျှမကြာခဏတတ်နိုင်သမျှမွမ်းမံ. USAHello ဥပဒေရေးရာအကြံဉာဏ်ကိုမပေးပါဘူး, မဟုတ်သလိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ပစ္စည်းများမဆိုဥပဒေရေးရာအကြံဉာဏ်ကိုအဖြစ်ခေါ်ဆောင်သွားခံရဖို့ရည်ရွယ်ထားပါသည်. သင်တစ်ဦးအခမဲ့သို့မဟုတ်တန်ဖိုးနည်းရှေ့နေသို့မဟုတ်တရားဝင်အကူအညီရှာနေနေတယ်ဆိုရင်, please contact the services on this page.